32 အဘို့ရလဒ် 3d
ဘွတ်ဖိနပ်အတွက် puss: အမှော်ပဲမျိုးစုံကိုဖမ်းယူ
Kitty မရှေ့တော်၌ထိုမှော် bean ကိုခိုးယူ။ ဂျက်ဖမ်းမိရမနေပါနဲ့!
3d Mario ဗုံးခွဲသူ
အဆိုပါဂန္ဗုံးခွဲသူကနေရှေးခယျြဖို့စိတ်ကူးသစ်ကိုကြည့်ပြီးပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ, 3D စတိုင်ယခုဖြစ်ပါတယ်။
3d moto ပြိုင်ကား
အကောင်းဆုံးကိုပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားမှာ 3d ပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကမ္ဘာတလွှားခရီးသွား။
ယူရို 2012 တွင်အခမဲ့ကန် 3d
ယူရို 2012 တွင်ဘုန်းအသရေဖို့သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်အချို့သောမော်ကွန်းအခမဲ့ကန်ဘောဂိုးသွင်း!
အမျက်ထွက် biker - 3d ဖုန်စက်ဘီး
အမျက်ထွက် Biker ပဲအခြားဖုန်စက်ဘီးရူပဗေဒဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဂိမ်းပဲအမြန်နှုန်းနှင့်လေထုထဲတွင်အနည်းငယ်လှန်ထက်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံဖြစ်ပါတယ်။ အမျက်ထွက် Biker တာယာကျော်, အမျိုးမျိုးသောလမ်းခွအေနအေအောက်မှာထိန်းချုပ်မှုအတွက်စိန်ခေါ်မှုကစားသမားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှာဆိုင်ကယ်ရည်ရွယ်သည်
3d ဆီးနှင်း Kart ချီတက်ပွဲ SpongeBob
သင်အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဤ 3D Nicktoons Kart ပြိုင်ကားသမားအတွက်သတ္တုဖို့နင်းထားပါ!
flash ကိုစစ်တုရင် 3d
အလွန်ကြီးစွာသော AI အပြိုင်ဘက်နှင့်အတူ 3D Flash ကိုစစ်တုရင်
roaders 3d ချွတ်
ဟာ Off Roaders အတွက်ပုဒ်လွှမ်းမိုး။ သင့်ရဲ့ jeep ၏ဘီးကို ယူ. ပထမဦးဆုံးလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 3D မောင်းနှင်မှုဂိမ်းအတွက်အောင်ပွဲယူဖို့အပုဒ်ကတဆင့်မောင်း။
ဆန္ဒပြပွဲပြိုင်ကားရဲ့ဒီစူပါလိဂ်အနိုင်ရသင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြပါ။ အဆိုပါပြိုင်ဘက်ခက်ခဲတဲ့ပေမယ်သင်စင်မြင့်ပေါ်တဲ့နေရာအနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင် willpower နှင့်ယှဉ်ပြိုင်တွေအများကြီးရှိရပါလိမ့်မယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မြေမှုန့်ကိုစားပါစေ။ ပြီးတော့ဒီကိုပြင်ဆင်? မဖြုန်းတီးပါနဲ့
အသီးအသီး Track.The Ultimate လူမျိုးအနိုင်ရသွားစိန်ခေါ်မှုချုံးနှင့်အတူ Ultimate 3D နီယွန်လူမျိုးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနှင့်အနိုင်ရလိုချစ်သောသူ bikers ဘို့ပေါ်မှာခံစားရသည်။ ဒါဟာငါးချုံးဖြတ်သန်းသော်လည်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သငျသညျလုပ်ရန်သင့်စက်ဘီးမျိုးနွယ်များနှင့်ထိန်းချုပ်
3d လွတ်မြောက်ရန်: ဘင်လာဒင်ကို villa
တစ်ဦးသရော်စာ 3D နဲ့ Escape ဂိမ်း Play ။ ရေတပ်တံဆိပ်ကိုသူတို့လမ်းအပေါ်များမှာ! အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုသင်သတ်အံ့သောငှါလာမီကအိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ villa မှလွတ်မြောက်ရန်။ သငျသညျလွတ်မြောက်ရန်အဖြစ်ဘင်လာဒင်၏ပျော်စရာ Make!
3d F1 ပြိုင်ကား
ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူဖော်မြူလာ 1 ကားများပေါ်တွင်မော်တာပြိုင်ကားယူပြီးအသက်ရှု။ ငါးကွဲပြားခြားနားသောပုဒ်, အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများ, ထိပျတနျးဂရပ်ဖစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဒီဂိမ်းရန်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပါလိမ့်မယ်။
3d ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad ပြိုင်ကား
သင်ကတစ်ဦး Ultimate ကို Quad စက်ဘီးစီးပြိုင်ကားသမား Be ရန်သင့်ချန့်စ၏အရာအားလုံး Make အမျှတချို့ကခက်ခဲတဲ့မြေပြင်အနေအထားမှတဆင့်ပြေးပြိုင်ပွဲ။
မည်သူမဆို Racing နိုငျ, ကိုသာအကောင်းဆုံးရှေ့မြောနိုငျသညျ! 100 ကျော်တစ်နာရီမိုင်မှာအလှည့် ယူ. ကျော် finish ကိုလိုင်းမှအပြေးပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်ယူပါ။ သင်စမ်းသပ်ဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်စမ်းသပ်မှု Play ။ နစ်ပေးနိုင်ပါတယ်!
3D စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲသော့ဖွင့်ဖို့က5ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှတဆင့် Racing ရန်သင့်စက်ဘီးကို Select လုပ်ပါ။ သငျသညျကိုလာမည့်အဆင့်တိုးဖို့အပြေးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရဖို့ရှိသည်ကဲ့သို့အချို့ခက်ခဲတဲ့မြင်းစီးသူရဲဆန့်ကျင် Racing ဖို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။
Sonic စန်းအမြောက်များ 3d
ဒီ 3D အကွာအဝေးဂိမ်းမှာမီး Sonic ။ ကွင်းကိုဖမ်းပြီး, သောဝေးသင်တတ်နိုင်သလောက် Sonic ကိုဖွင်။
ရော်နယ်ဒိုထိုအခါမက်ဆီငို။ ရော်နယ်ဒိုခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'သို့မဟုတ် 2012 ခုနှစ်အနိုင်ရမှစီရော်နယ်ဒိုကိုကူညီပါ: သင် 40 minigames ကစားရန်ရှိသည်ထိုငိုသံဂိမ်းဥပမာ, သငျသညျရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆံပင်ဖြတ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာဂိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်, သူ့ကားရပ်ရန်ရှိသည်, Mourinh ဖောင်းပွရန်ရှိသည်
ကာတွန်းသူရဲကောင်း xmas တိုက်ပွဲများ
ခရစ္စမတ်ခုနှစ်, တွမ်, ဂျယ်ရီ, ဖင်လန်, Rigby, Scooby Doo Phineas နှင့်ကစား snowballs ။ သင်တစ်ဦးစံချိန်အဖွဲ့ကစုဝေးရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်3ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကြီးမားတဲ့ adrenaline လွံရရဒီနောက်ဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂိမ်း Play ။ မိန်းကလေးသီချင်းအပုဒ်ရေဆက်ကပ်နှင့်ဆိုင်ကယ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းလှန်ဖို့မသေချာစေရန်ရှိကြောင်းလည်းအတားအဆီးလွန်ကိုကူညီပါ။ သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်တိုးမြှင့်ဖို့လမ်းတလျှောက်လုပ်-up ကပစ္စည်းများစုဆောင်းပါ။
ရေမျောမှာ SpongeBob မပြဲ
သငျသညျသေးငယ် skiers ကူညီခြင်းနှင့်ရေမြှုပ်ဘော့ထိခိုက်စေခြင်းအလိုငှါပိုကြီး skiers ရှောင်အဖြစ်တောင်ပေါ်ကဆင်းနှင်းလျှောစီး။